ခရီးသွားသည့်အချိန်တွင် အားလုံးသည်တည်းခိုမည့်နေရာကို မည့်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ကြပါသလဲ။ ဈေးနှုန်း ၊နေရာစသော အမျိုးမျိုးသော စံနှုန်းများလည်းရှိသည်ဟု ထင်သော်လည်းဈေးသက်သာပြီး အရက်ဆိုင် နေရာများလည်း လှပသော တည်းခိုခန်းနေရာများလည်း ရှိနေပါသည်။ တည်းခိုခန်းများ၏ဆွဲဆောင်မှုများက မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမှု ထိုတန်ဖိုး။ တစ်ည ၂၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ ယန်းလောက်ဖြင့် တည်းခိုနိုင်ပါသည်။ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်များ ဝန်ထမ်းများ တည်းခိုသူအချင်းချင်း၏ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း မြင်နိုင်သည်မှာ ထူးခြားချက်တစ်ခု။ ဆက်လက်ပြီး ယခုတစ်လောတွင် အရက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းများရှိနေသော တည်းခိုခန်းများသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏နေရာအသီးသီးတွင် ပေါ်ပေါက်လာပြီး လူကြိုက်များသော မဂ္ဂဇင်း (ဆိုတိုခိုတို) တည်းခိုခန်းအတွက် အထူးထုတ်များလည်း ရှိလာပြီး လက်ရှိတွင် အာရုံစိုက်လာကြသောနေရာဖြစ်ပါသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်သည် တိုကျိုခရီးသည် ပိုမိုကာပျော်ရွင်နိုင်သောအရက်ဆိုင်ပုံစံစားသောက်ဆိုင်များ ၅ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE (ခုရာမအဲ ဘူတာ)
တစ်ည ၂၈၀၀ ယန်းနှင့် သက်သာစွာတည်းခိုနိုင်သော အရက်ဆိုင်ဖြင့် လူကြိုက်များသောတည်းခိုခန်းဖြစ်ပါသည်။ အဲဒိုခေတ်မှ ဆက်တိုက်ရှိလာသော အရုပ်ဆိုင်များရှိနေသော ဂိုထောင်များကို ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်သားများက ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေကြသောဆိုင်များမှ လက်ဖြင့်လုပ်ထားသောအရာများမှ နွေးထွေးမှုများကို ခံစားနိုင်ပါသည်။
ဆိုင်၏ပထမထပ်တွင် တည်းခိုသူများအပြင် တခြားသူများပါအသုံးပြုနိုင်သော နေရာများလည်းရှိပါသည်။ မနက်က နေ့ လည်အထိကတော့ ဖုတ်ပြီးခါစပေါင်မုန့် နှင့် ကော်ဖီ၊ ညနေရောက်ပါက အရက်နှင့် အရသာရှိသော အမြည်းများကို သင့်တော်သလိုအရသာခံစားနိုင်သော Nui ၏ လူကြိုက်များသော လျှိုဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ကိုလာရောက်ကြသော နိုင်ငံခြားသားများကလူကြိုက်များသော မြို့ (တနိချူး) တွင် တည်ရှိသော hanare တွင် အစားအသောက်ကတော့ ပြောစရာမလို၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းများမှ တည်းခိုခြင်းအထိ လုပ်နိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်ပါသည်။
မြို့ တစ်ခုလုံးသည် ဟိုတယ်ဖြစ်ပြီး တည်းခိုခန်းနေရာသည် (သီးသန့် ရှိနေသော ) အနေအထား။ ဟိုတယ်နှင့် သီးသန့် နေရာတွင်ရှိနေသော ဧည့်ကြိုနေရာတွင် လုပ်ဆောင်စရာများကို လုပ်ဆောင်ပြီး မြို့ ၏မြေပုံနှင့် ရေချိုးခန်း လက်မှတ်ကို ရရှိပါမည်။ မြေပုံကိုကြည့်ရင်း တောင်ကြားမြို့ ကို လမ်းလျှောက်ကာ ညဘက်သည် နှစ်သက်သောရေချိုးခန်းကိုရွေးကာ ဝင်နိုင်သည်ဟုဆိုသော ပျော်စရာများလည်းရှိနေပါသည်။
ဝါးများဖြင့်လုပ်ထားသော ရွှေများဖြင့်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများစသောများစွာသော ရိုးရာလက်မှုအနုပညာဆိုင်များလည်း များစွာရှိနေပြီး အထပ်နိမ့် အဆောက်အဦးများကလည်း ဆက်တိုက်ရှိနေသော တောင်ကြားတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများက အပြည့်ရှိနေသော မြို့ နှင့်မတူသော ဂျပန်၏ဆွဲဆောင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
BOOK AND BED TOKYO ( အိခဲဘုခုရောဘူတာ)
၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး များစွာသောမီဒီယာများတွင်လည်း ရေပန်းစားနေသော ဒီနေရာ။ (တည်းခိုနိုင်သော စာအုပ်ဆိုင်) သည် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်ထဲတွင် ၁၇၀၀သော စာအုပ်များကတန်းစီပြီးရှိနေပါသည်။ ခရီးသွားစာအုပ်များလည်း များစွာ၊ အရက်သောက်ခြင်းအပြင် စာဖတ်ခြင်းကို ပါ ပြုလုပ်နိုင်သော ခမ်းနားစွာ အချိန်ကို ကုန်ဆုံးနိုင်ပါသည်။
BOOK AND BED TOKYO တွင်ခံစားနိုင်သည်မှာ စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်း မသိလိုက်သည့်အတောအတွင်းတွင် အိပ်ပျော်သွားခြင်း (အိပ်ချိန်တစ်ခဏ) ကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သော် ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကို ကုန်ဆုံးနိုင်သောနေရာသည် တခြားတွင်မရှိပါ။ ဒီနေရာတွင် တည်းခိုရင်း ဂျပန်နိုင်ငံကို လည်ပတ်သွားလာသည့်ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့် မည်။
IRORI HOSTEL and KITCHEN (ဘခုရောယော်ကိုယာမဘူတာ)
ဒီနေရာသည် IRORI တွင် တည်းခိုရုံသာမက ဂျပန်ဒေသအသီးသီးမှ ရောက်လာသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ငါး၊အရက်များ၏ ထင်ရှားသောပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ခရီးသွားများက ထိုအစားအသောက်များကို အတူတူဟင်းချက်စားခြင်းဖြင့် မီးလင်းဖိုကိုအဓိကထားကာများစွာသော ဖလှယ်မှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သော နွေးထွေးမှုများနှင့် တွေ့ ဆုံနေသော နေရာဖြစ်ပါသည်။
သဘောကောင်းသောဝန်ထမ်းက တိုကျိုသာမက နယ်များရှိ ကောင်းမွန်သောနေရာများကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ခရီးသွားများနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်သောနေရာအနေဖြင့် တဖန် အသစ်သော နေရာများကို ရှာဖွေ့ နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များစုစည်းရာနေရာဖြစ်နေပါသည်။
တိုကျို၏လယ်သမားအိမ်ဟောင်းတည်းခိုခန်း toco. (အီရိတနိဘူတာ)
တိုကျိုတွင်နေရင်း တည်ငြိ်မ်သောအနေအထားကို ခံစားချင်ပါက ဒီနေရာ။ အစိမ်းရောင်များလှပသော ပန်းခြံ၊ ဆောက်လုပ်ပြီး သက်တမ်း ၉၀ ခန့် ရှိသော လယ်သမားအိမ်အဟောင်းကို ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားသော တည်းခိုခန်းသည် တစ်နေရာရာတွင် လွှမ်းမောဖွယ်ကောင်းသော ခံစားချက်မျိုးကို ခံစားရစေပါသည်။
ပင်မအိမ်ဖြစ်သော လယ်သမားအိမ်ဟောင်းဆိုသည်မှာ သီးသန့်စံအိမ်ရှိသော တည်းခိုခန်းသည် စာအုပ်ဖတ်ခြင်း ၊ခရီးထွက်ရန်တိုင်ပင်ခြင်းများစသော လွတ်လပ်သောအချိန်များကို ကုန်ဆုံးနိုင်သော အနားယူသောနေရာ။ ၁၉ နာရီမှ ဘားအချိန်ရောက်လာပြီး ကမ္ဘတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ခရီးသွားများ ၊တိုကျိုမြို့ ကိုလည်ပတ်သူများ ၊ ဒေသခံများဖြင့် စကားပြောဆိုခြင်းများရှိနေသော အချိန်ကို ကုန်ဆုံးနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်တည်းခိုခန်းမဆို ခရီးသွားသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေလောက်သော အရက်ဆိုင်များကလည်း အလွန်လှပသည်။
တိုကျိုကို လာရောက်လည်ပတ်သူများကတော့ ဆက်ဆက်ယခုတစ်ကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးသော တည်းခိုခန်းတွင် တည်းကြည့်စေချင်ပါသည်။
＜တည်းခိုခန်းတွင် တည်းကာ ကြည့်စေချင်သော တိုကျိုရှုခင်းများ＞
IRORI HOSTEL and KITCHEN ၏ အနီးဆုံးဘူတာ၊ ဘဂုရောယော်ကိုယာမဘူတာမှ ရထားဖြင့် ပျမ်းမျှ ၂၂ မိနစ်။ မြို့လယ်တွင် ရှိသော်လည်း တည်ငြိမ်သောအနေအထားကို ခံစားနိုင်သောနေရာဖြစ်ပါသည်။ ကီမိုနိုပုံစံများဝတ်ထားသော သူများက လမ်းလျှောက်နေကြပြီး ရေနွေးကြမ်းများကို သောက်သုံးနိုင်ခြင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
Nui. Hostel & BAR LOUNGE ၏ အနီးဆုံးဘူတာဖြစ်ပြီး ခုရာမအဲဘူတာမှ ရထားဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၅ မိနစ်။ တိုကျိုကိုလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ခွင့်ရှိပါက ဆက်ဆက် ရှုခင်းကြည့်သောနေရာမှ ငေးမောကြည့်နိုင်ပါသည်။
တိုကျို၏ လယ်သမားအိမ်ဟောင်းတည်ခိုခန်း toco.၏ အနီးဆုံးဘူတာ၊ နယူးတနိဘူတာမှ ရထားဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၅ မိနစ်။ ဂျပန်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြသောသူများဖြင့် ဆူညံနေသော လူကြိုက်များသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ ခမိနာရိမွန်းမှ ဟိုးဆိုးမွန်းအထိ ချိတ်ဆက်ထားသော လမ်းတွင် လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ ဂျပန်ရိုးရာမုန့် ဆိုင်များကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါသည်။
Hanare၏ အနီးဆုံးဘူတာ၊ နိပိုရိဘူတာနှင့် BOOK AND BED TOKYO ၏ အနီးဆုံးဘုတာ၊ အီခဲဘုခုရောဘူတာမှ ရထားဖြင့် ပျမ်းမျှ ၁၇ မိနစ်။ မြို့ ထဲနှင့် မဆိုင်ဘဲ ပေါများသော သဘာဝများရှိနေသော ပန်းခြံဖြစ်ပါသည်။ နွေဦးတွင် ဆာကူရာသည် အထူးသဖြင့် လှပပြီး အကောင်းဆုံးအချိန်တွင် မီးများလည်းထွန်းညှိုပါသည်။
Hanare ၏အနီးဆုံးဘူတာ၊ နီပိုရိဘူတာမှ ရထားဖြင့်ပျမ်းမျှ ၅ မိနစ်။ ဧရိယာအတွင်းတွင် ရုက္ခဗေဒပြတိုက်၊ အနုပညာပြတိုက်များ စသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သောအရာများလည်း ရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ နွေဦးတွင် ဆာကူရာ၊ နွေရာသီတွင် ရန်း၊ ဆောင်းဦးတွင် မိုမိဂျိ၊ ဆောင်းတွင် ဆောင်းပန်းများ၊ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရာသီလေးခုကို ခံစားနိုင်သောေ နရာဖြစ်ပါသည်။